FAMARANANA NY DINGANA FANDRAISANA MPIASA AVY ANY IVELANY – Bianco
Marihina fa tafiditra tanteraka ao anatin’ny fampiharana ny didim-panjakana vaovao laharana 2020-013 ny 15 janoary 2020 mikasika ny fanitsiana ara-drafitry ny BIANCO ny dingana rehetra notanterahina hatreto. Natomboka tamin’ny fandraisana arahin-tsivana ireo mpiasa tato anatiny izany. Tamin’ny volana septambra lasa teo no vita io dingana voalohany io. Manodidina ny 93% no tahan’ny mpiasa namaly ny filàn’ny fanitsiana ara-drafitra. Notsinjaraina izy ireo mba hanatevin-daharana ny rantsamangaikan’ny BIANCO any amin’ny faritra ary mba ho fampitoviana lenta sy hahitana fahombiazana eo amin’ny fanatanterahana ny asa.